Qabyaaladu Waa Wax Laga Xaragoodo, Haddii Aad Tahay Hogaamiye Qaran. Farmaajo Se Ma u hadli karaa Beeshiisa Dulman?Mahamoud Samatar | Awdalmedia.com
Qabyaaladu Waa Wax Laga Xaragoodo, Haddii Aad Tahay Hogaamiye Qaran. Farmaajo Se Ma u hadli karaa Beeshiisa Dulman?Mahamoud Samatar
Mon 04 September 2017.
Madaxwaynaha Somlia, Farmaajo waxa uu ka soo jeedaa beesha Mareexaan oo dagta Kismaayo iyo gobolada ku teedsan ee Jubooyinka. Burburkii dawladii Siyaad Barre ilaa ay Al-Shabaab la wareegtay waxa Kismaayo gacanta ku hayay Bare Hiiraale oo ka soo jeeda beesha Mareexaan, inkasta oo gacan ku haynta Kismaayo ay dagaalo ku dhexmareen dhaw jeer Morgan iyo maleeshiyo beeleed u watay oo aan ka soo jeedin gobolada Jubboyinka ama Kismaaayo.
Jubbaland ama Kismaayo waxa gacanta u galiyay Axmad Madoobe ciidamada kenya 2012, ciidamada Kenya oo wali jooga Kismaayo.Ciidamda keyna waxa ka barbar dagaalamayay ciidamo uu u watay Axmad Madoobe oo ay taba bartay Kenya, ciidamadan oo lagu dhisay hab beeleed/Ogaden una badan ONLF, waxa dhismahooda iyo abaabulkooda ka dambeeyay Gandhi iyo dawladda Keyna. Gaandhi, Axmada Madoobe iyo siyaasiin ay isku beel yihiin oo ka tirsan dawladda kenya ayaa sababta ay u dhiseen ciidamada beelaysan ahayd sidii ay beeshoodu gacanta uGu dhigi lahayd dekedda Kismaayo beelaha kalena uga saari la haayeen Kismaayo, si ay dhaqaale ahaan uGa faa'idaan, taas oo u hir gashay oo maamulka Kismaayo uu qoyska Axmad Madoobe ka taliyo, dhaqaalihii oo dhana u gacan galay , oo ay wali dhuxusha si sharci darro ah uga dhoofiyaan Kismaayo, iyada oo ay mamnuucday dawladii Xasan Sheekh.
Tan iyo markii Kenya iyo Axmad Madoobe gacanta ku dhigeen Kismaayo waxa ay bara kicin, dil, hanti boob iyo xadhig ku hayeen beelihii dagganaa Kismaayo ee aan ahayn beesha Axmad Madoobe/Ogadedn, ONLF. Bara kicinta, dilka iyo boobka ay Axmad Madoobe iyo maleeshiya beeleediisu ku hayaan dadka kale ayaa waxa ay ku shaabadeeyaan waa argagaxiso iyo Al-Shabaab.
Dawladda Kenya ayaa iyadu waxa ay danaynaysay Badda Somalia ay wadaagaan ee ay sheegato sidii ay gacanta uGu dhigi lahayd si ay khyaraadka ku Jira ula bixi lahayd iyada oo ku marmarsiiyoonaysa waxa aan u joogaa meesha sidii aan iskaga moosi laa /Buffer Zone argagaxisada Al-shabaa. Kenya iyo kooxda Gandhi ayaa wax ay ku heshiiyeen in Kenya gacanta u galiso Kismaayo Axmad Madoobe, Kenyana ay khayraadka badda gurrato iyaka oo hiigsanaya in dagaalka Al-shabaa sii daba dheeraado si ay Kenya uGu nagaado Kismayo, Somala.
Malayshiyaadkii taabacsanaa Col. Hiiraale oo ka soo jeeda beesha Mareexaan, ayaa tan iyo markii dagaalka lagaga saarey Kismaayo sanadkii 2013 waxa xarun ay u ahayd Goobweyn iyo Sabca Ashraaf oo aan waxbadan ka fogeyn Kismaayo. Dagaalkii lagaga saaray Bare Hiiraale iyo ciidamadiisa waxa iska ka kaashaday ciidamada Kenya oo ku hubaysan tankiyo iyo maleeshiyo beeleedda Axmad Madoobe/Ogaden oo u badan ONLF ku biirtay maleeshiyada Axmada Madoobe.
November 2015 waxa uu dagaal xoogan oo u dhex maray ciidamada Col Barre Aadan Shire Hiiraale iyo ciidamada maamulka Axmed Madoobe deegaanka Goobweyn ee duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Dagaalka ayaa ka dambeeyay kadib markii ciidamada Maamulka Axmed Madoobe ay weerareen fariisin ciidamada Barre Hiiraale ku lahaayeen deegaanka Goobweyn, waxaana la sheegayaa in qasaaro uu ka dhashay dagaalkaa. C/rashiid Macalin Gaas, oo kamid ahaa saraakiisha ciidamada Barre Hiiraale ayaa sheegay in dagaalka uu ka dambeeyay markii ciidamada Axmed Madoobe isku dayeen iney xoog ku galaan saldhiga ciidamada ku sugnaayeen.Dagaalkaasi ayuu sheegay in ciidamada maamulka Jubba ay kaga dileen ku dhawaad 2 askari oo mid kamid ah meydkiisa ay horey uqaateen sida uu sheegay C/rashiid Macalin Gaas.
Col. Bare Hiiraale iyo ciidamadiisii laga fara maroojiyay dagaankoodii Kismaayo iyo tuullooyinka ku xeeran, waxa ay dhexda u galeen laba cadaw oo kala ahaa Al-Shabaab iyo maleeshiyo beeleedda Axmad Madoobe oo kaashanaya ciidamda Kenya, ayaa bilawgii 2016 waxa dib loogu celiyay Kismaayo. Ciidamadii Bare Hiiraale ayaa waxa badh lagu daray ciidamada Ethiopia halka qaarna lagu xereeray Xero ay AMISOM u samaysay, xeraadaas oon wax daryeela loogu samayn oo cunta la'aani ku qabsatay.
Dhibaatadii iyo cadaawadii Axmad Madoobe, Kenya iyo Al-shabaa ee iskugu darsamay, Col. Bare Hiraale iyo Ciidamadiisii ayaa waxa ay ku kaliftay ama ku qasabtay in dhalinyaro badan oo ka soo jeeda beesha Mareexaan ay ku biiraan Al-Shabaab. Col. Bare Hiiraale oo waligiiba la dagaalamay Al-Shabaab intii aanay Axmad Madoobe iyo Kenyaatuhu isku kaashan, ayaa mar lagu edeeyay waxa uu la socdaa Al-Shabaab,ayaa yidhi "Aniga iyo Al-Shabaab waxa aan leenahay cadaw isku mid ah".
Beelwaynta Mareexaan ee aan waxa shaqo ah ku lahayn dambiyaddii uu galay Siyaad Barre ayaa waxa iskugu darsamay aargoosi, dil dhac, kufsi iyo xasuuq lagu xidhiidhiyay Siyaad Barre markii uu taliskiisii dhacay, iyo dulimiga, dilka, kufisi iyo bara kicinta uu hadda Axmad iyo kooxdiisu ku hayaan. Taas oo aad moodo in ay noqotay caadi, haddii uu Mareexaan yahay waa looma ooyaan xoolahiisa iyo naftiisuna waa xalaal, dil iyo dhacba. Waxa kale oo iyaduna caadi noqotay in dhibanayaashii ay shibta galaan kadib markii ay garan waayeen cid ay ku cawdaan.
Iyada oo aanu shaki ku jirin in Farmaajo og yahay cadaalad darada iyo dulmiga ay beeshiisu kala kulantay Axmada Madoobe iyo xulafadiisa Kenyaataha, ayaa isaga oo ah madaxwaynaha Qaran ee Somalia ah ay ku adag tahay in uu wax u qabto beeshiisa dulman, taas oo wali aanu booqan gobolada ay beeshu dagto ama Gedo, maxaa yeelay waa nin uu dabray mansabka uu u hayao Somalia.
Madaxwaynaha Somalia, Farmaajo waxa uu booqaday Jubbalaand waxana uu la kulmay Axmada Madoobe iyo kooxda uu ku shaqaysto.
Waxase aad moodaa in dhalintii beesha Mareexaan ee ay qabsatay LABA DARAN MID DOORE, Al-Shabaab iyo gumaysiga Axmad Madoobe, in ay rajadoodii soo noqonayso markii la doortay Farmaajo, oo ay dhalin badan iyo horjooge yaal badan oo beesha ihi iska soo dhiibayaan Al-Shabaab.
Dhawr cisho ka hor waxa ay beesha Ogadedn iyo ONLF oo 100% taageersan Axmad Madoobe iyo maamulkiisa Kismaayo ay ku edaynayeen Farmajo waxa uu halgmaa, Cabdi Kariim sh. Muuse/Qalbi Dhagax gacanta u galiyay Ethiopia. Farmaajo waa nin Mareexaan ah oo ay eheladiis ama beeshiisa ay gumaadeen oo ay Xasuuqeen ciidama Kenya iyo hoogaamiya beeleedka Ogaaden, Axmad Madoobe.
Arinta iswaydiinta mudani waxa ay tahay ONLF ama Ogaden siday u arkaan gumaysiga Kenya ee gumaysta NFD ee Axmad Madoobe ku soo hogaamiyay Somalida Jubbooyinka/Mareexaan iyo beel o kaleba si loo xasuuqo, nafta Qalbi Dhagax se ma ka fiicantahay kuwii Axmad Madoobe iyo Kenyaatuhu ku xasuuqeen Kismaayo iyo boqolaalka ugu Jira jeelasha?.
Iyada oo ay qabyaaladdu ama beelaysigu yahaya waxa laga xaragoodo, dadka qudha ee maanta ku toosan , ama aanay ceeb ku ahayn in ay isbeelaystaan ama qabiil isku raacaan, waa dadka xaqoodii, ama xuquuqdoodii loo diiday reer hebel baad tihiin awgeed. Halgankooduna kama duwana , kii Koonfur Afrika, Falastiin, Israa' iil iyo Maraykanka maddow .Somalida qudha ee aan lagula yaabin, qabyaald ama beelaysiga waa beelaha loo xoogsheetay ee Somalia iyo beelaha waligoodba la soo cadaadin jiray, ee dadnimadoodana la qudhsanjiray, sida Midgaha , Gabooyaha iyo Tumaalka.